Fantaro ilay bilaogera Yesenia Corrales · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2018 9:15 GMT
Nandritra ny telo taona, nifantoka tamin'ny fitodihana any amin'ireo faritra mpifanolo-bodirindrina manodidina ny tanàna, toa an'i La Loma, sy ireo faritra hafa ao Kolombia ny tetikasa HiperBarrio ao Medellin. Na izany aza, asa mafy nataon'ireo mpandrindra ny tetikasa izany, indrindra fa ireo bilaogera vaovao, izay nanampy aina ny tetikasa.
Tafatafa iray hafa miaraka amin'ny iray amin'ireo bilaogera, Yesenia Corrales, izay ho tonga ihany koa ao amin'ny Fihaonamben'ny Global Voices Citizen Media ao Santiago, Shily ho atao ny 6 ka hatramin'ny 7 Mey ity mba hizarana ny traikefany amin'ny tetikasa.
Nanomboka tamin'ny fisalasalana kely ny fanombohany tamin'ny tetikasa. Tamin'izany, dia mpampiasa matetika ny tranombokim-panjakana tao La Loma izy, ary nanampy tamin'ny tetikasa hafa tao amin'ny vondrom-piarahamonina. Rehefa nasain'i Gabriel Vanegas, mpiandrakitra ny tranomboky mba hanatrika fivoriana momba ny fanombohan'ny tetikasa izy, dia nisalasala:
Tao no nifankahitanay tamin'i Álvaro Ramírez Ospina, izay nilaza taminay tamin'io tolakandro io, hoe: “Hampianatra anareo ny fomba famoronana sy fitantanana bilaogy aho. Hitondra kamerà sy fakantsary video isika mba hahafahantsika mifandray amin'ny hafa amin'ny fomba hafa. ” Tsy nino azy ireo mpandray anjara, ary nifampilaza tamin'ny tenanay hoe: “Ahoana no ahafahan'ny olona iray tonga indray andro sy mampanantena zavatra antsika?”
Fotoana fohy taorian'izay, nanomboka nanao izany indrindra ny mpikambana voalohany tao amin'ny tetikasa HiperBarrio ao La Loma. Nanomboka niova ny fomba fampitan'izy ireo ny tantaran'ny manodidina azy ireo. Nanomboka ny dingana “fanavotana ny fahatsiarovana ara-tantara sy ara-kolontsaina” an'i La Loma ny ekipa, ary araka ny filazan'i Yesenia, dia nanomboka namoaka “tantara fohy izay matetika mitranga any amin'ny zoro mahafinaritra any avaratra andrefan'i Medellín” ao amin'ny bilaogin'izy ireo.
Yesenia sy ny vondrona HiperBarrio ao La Loma
Ho an'i Yesenia, nanampy azy “hahalala indray, ny fivoaran'ny fiainan'ny mponina, ny olan'izy ireo, ary ny fananganana fiarahamonina ataon'ny vondrona tanora madinika izay mampiseho ekipa miara-miasa tsara” ity traikefa ity
Amin'ny fanarahana ny blaoginy amin'ny ampahany amin'ity tetikasa ity ao amin'ny bilaoginy manokana, tratra ny fanantenany. Araka ny filazan'i Yesenia, anisan'izany ny fahafahana:
“Mampita” fihetseham-po sy fahatsapana ho an'ny mpihaino manerantany. Mba hahatongavana amin'ireo vondrom-piarahamonina ahitana ny tanora sy ny olon-drehetra maniry ny haneho hevitra, ho vavolombelon'ny ain'ny fiarahamonina izay azo jerena amin'ny alalan'ity fomba ity. Farany, mba hanamafisana orina ny vondrom-piarahamonina midadasiky ny blaogy izay lasa fiteny ofisialy mampiroborobo ny fitoviana eo amin'ny mediam-bahoaka ny famakiana, ny fanoratana sy ny famakafakana bilaogy hafa.
Hanana namana mahafinaritra miaraka aminy ao amin'ny Fihaonamben'ny GV Citizen Media i Yesenia, izay hiaraka amin'ireo solontena hafa avy amin'ny tetikasa Rising Voices mba tsy hizara ny fanantenan'izy ireo ho an'ny tetikasa ihany, fa ho an'ny mediam-bahoaka ihany koa na aiza na aiza. Tahaka ny maro amin'ireo mpikambana ao amin'ny Hiperbarrio, mavitrika amin'ny tranonkala media sosialy maro tahaka ny kaontiny Twitter sy Flickr izy.